Mpikaroka, Mpiloka Iray, ary Tantsambo | Manova Olona ny Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Armenianina (Andrefana) Batak (Toba) Bicol Boligara Cebuano Chichewa Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Myama Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tiorka Tseky Tsonga Twi Venda Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
NANANA asa tsara ny tovovavy iray saingy tsy liana tamin’ny resaka Andriamanitra mihitsy izy. Fantany anefa tatỳ aoriana hoe inona no antony nampisy azy. Lasa nahafantatra ny marina momba ny maty ny tovolahy iray katolika ka nanova ny fiainany. Kivy tamin’ny fiainana ny tovolahy iray hafa. Lasa nahafantatra an’Andriamanitra anefa izy ka lasa Kristianina. Ahoana no nataon’izy ireo?
‘Nieritreritra foana aho hoe: “Maninona isika no nisy?” ’​—ROSALIND JOHN
FIAINANY TALOHA: NANANA ASA TSARA
Teraka tany Croydon, any atsimon’i Londres aho. Sivy mianadahy izahay ary izaho no fahenina. Avy any amin’ny nosy Saint-Vincent any amin’ny faritr’i Karaiba i Dada sy Neny. Metodista i Neny. Tia nianatra be aho nefa tsy mba liana tamin’ny resaka Andriamanitra mihitsy. Matetika aho no nankeny amorona farihy teny akaikinay rehefa vakansy, ary namaky boky be dia be nindramiko tany amin’ny fitehirizam-boky.
Te hanampy ny sahirana aho, taona vitsivitsy taorian’ny fianarako. Nanampy ny tsy manan-kialofana sy kilemaina ary votsa saina no asako. Nanao siansa mifandray amin’ny fitsaboana teny amin’ny oniversite aho avy eo. Tsy nampoiziko mihitsy fa nahazo asa tsara be foana aho rehefa nahazo diplaoma ary nihananan-karena be. Mpanolo-tsaina momba ny fandaminana asa aho ary mpikaroka momba ny fiaraha-monina. Izaho ihany no nandamina ny asako ka ordinatera sy Internet fotsiny no nilaiko. Matetika aho no nankany ampitan-dranomasina nandritra ny herinandro vitsivitsy. Natory tany amin’ny hotely tiako indrindra aho, ary nankafy ny manodidina tsara tarehy. Nankany amin’ireny toerana misy rano mafana fanatsarana bika sy misy fanaovana fanatanjahan-tena ireny koa aho. Izany tamiko no tena fiainana! Mbola te hanampy ny sahirana ihany anefa aho.
Nieritreritra foana aho nandritra ny taona maro hoe: “Mba inona re no antony ahavelomantsika e? Dia maninona isika no nisy?” Tsy nitady valiny tao amin’ny Baiboly mihitsy anefa aho. Nitsidika ahy i Margaret, zandriko, sy ny namany tamin’ny 1999. Vavolombelon’i Jehovah izy ireo ary tena te hanampy ahy ilay namany. Lasa nanaiky hianatra Baiboly taminy aho. Tsy dia niraharaha be an’ilay izy anefa aho satria variana tamin’ny fiainana sy ny asa.
Nifindra tatỳ atsimoandrefan’i Angletera aho tamin’ny 2002. Nanohy nianatra tany amin’ny oniversite aho satria te hahazo diplaoma ambony indrindra amin’ny fikarohana momba ny fiaraha-monina. Lasa nivory foana tany amin’ny Vavolombelon’i Jehovah izaho sy ny zanako lahy. Nahita fianarana be aho, nefa tao amin’ny Baiboly no tena nahalalako ny antony mahatonga ny olana eo amin’ny fiainana sy ny vahaolana amin’izany. Marina mihitsy ny lazain’ny Matio 6:24 fa tsy afaka hoe sady hanompo an’Andriamanitra isika no hanompo harena. Tsy maintsy nifidy izay tena zava-dehibe àry aho.
Nianatra ny boky hoe Misy Mpamorona Iray Miahy Anao Ve? * ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny 2001. Niara-nianatra tamin’izy ireo aho ka resy lahatra hoe i Jehovah, ilay Mpamorona antsika, ihany no mahavaha ny olana mahazo ny olombelona. Nampianarina tany amin’ny oniversite anefa fa tsy mila mino ny Mpamorona ianao vao hisy dikany ny fiainanao. Tezitra be aho. Roa volana fotsiny àry no nianarako tany dia niala aho, ka nifantoka kokoa tamin’ny fianarako Baiboly sy ny fifandraisako tamin’Andriamanitra.
Nandrisika ahy hiova ny Ohabolana 3:5, 6, hoe: “Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao manontolo, fa aza miantehitra amin’ny fahaizanao. Eritrereto izy amin’izay rehetra ataonao, dia hataony mandeha tsara ny fiainanao.” Mety hanan-karena be sy hahazo asa tsara aloha ianao raha manana diplaoma ambony indrindra e! Tsara lavitra noho izany anefa ny mahalala an’ilay Andriamanitra be fitiavana. Arakaraka ny nianarako ny fikasany momba ny tany sy ny sorona nataon’i Jesosy no vao mainka nahatonga ahy ho te hanokan-tena ho an’ilay Mpamorona. Natao batisa àry aho tamin’ny Aprily 2003. Notsoriko tsikelikely ny fiainako taorian’izay.
Lasa mifandray tsara amin’i Jehovah aho, ary tsy voavidim-bola izany. Lasa milamin-tsaina aho ary faly satria mahalala azy. Mahafinaritra koa ny miaraka amin’ny olona tena manompo an’Andriamanitra.
Mihamahafanta-javatra foana aho rehefa mianatra Baiboly sy mivory. Tiako ny miresaka ny zavatra inoako amin’ny hafa. Izany no lasa asako izao. Afaka manampy ny olona hanatsara ny fiainany dieny izao aho ary manampy azy ireo hahazo ny Paradisa amin’ny hoavy. Lasa mpitory manontolo andro aho nanomboka tamin’ny Jona 2008, ary tsy mbola nahatsiaro ho sambatra sy afa-po hoatr’izany mihitsy aho hatramin’izay. Fantatro amin’izay ny antony mampisy antsika ary tena misaotra an’i Jehovah aho amin’izany.
‘Nisy vokany be tamiko ny nahafatesan’ilay namako.’​—ROMAN IRNESBERGER
FIAINANY TALOHA: MPILOKA
Lehibe tany Braunau, tanàna kely atỳ Aotrisy aho, ary Katolika izahay. Nanan-karena be ny olona ary tsy dia nisy heloka bevava tany.
Nisy zava-dratsy be nitranga tamin’izaho mbola kely. Niara-nilalao baolina tamin’ny namako be aho indray andro, tamin’ny 1984. Vao 11 taona teo ho eo aho tamin’izay. Tamin’io tolakandro io mihitsy koa anefa no voadonan’ny aotomobilina ilay namako dia maty. Nisy vokany be tamiko izany. Nieritreritra foana aho, nandritra ny taona maro, hoe hanao ahoana isika rehefa maty.
Lasa elektrisianina aho rehefa tsy nianatra intsony. Lasa zatra niloka aho ary vola be mihitsy no nilokako. Mbola tsy sahirana ara-bola mihitsy anefa aho. Lasa nanao spaoro be koa aho ary tia mozika rock mavesatra. Nandeha nandihy sy namonjy fety foana aho. Nanao izay nahafinaritra ahy fotsiny aho ary ratsy fitondran-tena be. Tsy afa-po tamin’ny fiainana mihitsy anefa aho tamin’izany.
Nisy Vavolombelon’i Jehovah efa antitrantitra izay nandondòna tao an-tranoko tamin’ny 1995, ary nomeny boky aho. Hazavainy ao izay lazain’ny Baiboly momba an’ilay hoe ‘Manao ahoana isika rehefa maty?’ Mbola nanakorontana ny saiko ny nahafatesan’ny namako ka noraisiko ilay boky. Tsy ilay toko momba ny fahafatesana ihany anefa no novakiko fa izy manontolo.
Voavaly tao ny fanontaniako ary mbola nahafantatra zavatra hafa koa aza aho. Katolika izahay ka i Jesosy ihany no tena ninoanay. Rehefa nandinika tsara ny Baiboly anefa aho, dia lasa nifandray tamin’i Jehovah Andriamanitra, Rain’i Jesosy. Faly be aho nahalala fa tsy hoe saro-pantarina sy tsy azo ifandraisana i Jehovah, fa ampahafantariny tsara an’izay te hahafantatra azy ny tenany. (Matio 7:7-11) Fantatro koa hoe manana fihetseham-po izy, ary mitana ny teny nataony foana. Lasa te handinika ny faminanian’ny Baiboly aho ary te hanamarina raha tena tanteraka tokoa izy ireny. Vao mainka izany nahatonga ahy hino an’Andriamanitra.
Vetivety dia takatro hoe ny Vavolombelon’i Jehovah ihany no tena te hanampy ny olona hahafantatra izay lazain’ny Baiboly. Nohamariniko tao amin’ny Baiboliko katolika daholo mantsy ny andinin-teny ao amin’ny bokin-dry zareo. Arakaraka ny nanaovako izany no nahatsapako fa nahita ny marina aho.
Nianarako tao amin’ny Baiboly fa tian’i Jehovah hampihatra izay nianarako aho. Hitako tao amin’ny Efesianina 4:22-24, ohatra, fa tokony ‘hanaisotra ny toetrako taloha, izay mifanaraka amin’ny fitondran-tenako fahiny’ aho, ary “hitafy ny toetra vaovao izay noforonina araka ny sitrapon’Andriamanitra.” Tsy ratsy fitondran-tena intsony àry aho. Tsy niloka intsony koa aho satria mahatonga ny olona ho tia harena sy tsy hety ho afa-po izany. (1 Korintianina 6:9, 10) Fantatro fa tsy tokony hiaraka amin’ny namako taloha intsony aho raha te hiova, fa hinamana amin’ny olona manaraka fitsipika mitovy amin’ny ahy kosa.
Tsy mora ny nanao an’ireo fiovana ireo. Nivory tany amin’ny Vavolombelon’i Jehovah anefa aho, ary nanomboka ninamana tamin’ny olona tany. Nanohy nianatra Baiboly irery koa aho. Novako ny mozika fihainoko sy ny tanjoko ary ny paoziko. Natao batisa aho tamin’ny 1995 ka lasa Vavolombelon’i Jehovah.
Tsy tia vola sy harena loatra intsony aho izao. Mora tezitra be aho taloha fa tsy hoatr’izany intsony. Tsy dia manahy be loatra ny amin’ny hoavy intsony koa aho.
Faly be aho fa anisan’ny mpanompon’i Jehovah eran-tany. Misy amin’izy ireny miatrika olana be, nefa tsy mivadika amin’i Jehovah mihitsy. Tsy variana manao izay mahafinaritra ny tenako fotsiny intsony aho izao. Faly be kosa aho fa manompo an’i Jehovah sy manao soa olona ary izany no handaniako ny fotoanako sy ny heriko.
“Izay vao misy dikany ny fiainako.”​—IAN KING
FIAINANY TALOHA: KIVY TAMIN’NY FIAINANA
Teraka tany Angletera aho fa nifindra tatỳ Aostralia izahay tamin’izaho fito taona. Nipetraka teto Gold Coast izahay. Toerana falehan’ny mpizaha tany atỳ Queensland, Aostralia izy io. Tsy mpanankarena izahay nefa nanana izay tena nilainay foana.
Tsy nahatsiaro ho sambatra aho na dia nanana ny ampy aza tamin’ny mbola kely. Lasa kivy be tamin’ny fiainana aho. Mpisotro toaka be mantsy ny dadako. Tsy tena tia azy aho satria mamo lava izy sady nampijaly an’ny mamanay. Efa tatỳ aoriana vao fantatro hoe hay ny zavatra niainany tamin’izy nanao miaramila tany Malezia no nahatonga azy nanao hoatr’ireny.
Lasa mpisotro toaka be aho teny amin’ny lise. Niala nianatra aho tamin’izaho 16 taona, ary niditra tao amin’ny tafika an-dranomasina. Nanandrana nifoka rongony aho ary lasa nandevozin’ny sigara. Vao mainka koa aho lasa niankin-doha tamin’ny toaka. Isaky ny faran’ny herinandro ihany aho tamin’ny voalohany no mamo, fa avy eo lasa isan’andro.
Lasa eritreritra aho tamin’izaho 20 taona teo ho eo raha tena misy Andriamanitra. Hoy aho: ‘Raha tena misy izy, maninona no avelany hijaly sy ho faty ny olona?’ Nanoratra tononkalo nanome tsiny an’Andriamanitra mihitsy aza aho, noho ny faharatsiana etsy sy eroa.
Niala tao amin’ny tafika aho tamin’izaho 23 taona. Niovaova asa foana aho ary nankany ampitan-dranomasina nandritra ny herintaona mihitsy. Mbola kivy foana anefa aho na teo aza izany. Tsy te hanatratra tanjona mihitsy aho. Tsy nisy zavatra mba nahaliana ahy mihitsy. Tsy nisy dikany tamiko izany hoe hanana trano na asa tsara na toerana ambony izany. Ny misotro toaka sy mihaino mozika no hany nanamaivana ahy.
Tsaroako tsara fa tena te hahafantatra ny antony mampisy ny olombelona aho indray andro izay. Tany Polonina aho tamin’izay, nitsidika an’ilay toby fitanana any Auschwitz. Efa namaky boky miresaka ny habibiana nitranga tao amin’io toby io aho. Rehefa tena nahita maso an’ilay toby sy ny hangezany anefa aho vao tena nalahelo be. Tsy azoko mihitsy hoe olombelona ve dia nahavita zavatra nampihoron-koditra be hoatr’izany tamin’ny olona mitovy aminy ihany. Tadidiko tamin’izay fa nihodidina an’ilay toby aho sady latsa-dranomaso no niteny hoe ‘Fa dia nahoana re e?’
Te hahafantatra ny antony mampisy ny fijaliana aho ka namaky Baiboly tamin’ny 1993, rehefa niverina avy tany ampita. Nisy Vavolombelon’i Jehovah roa tonga tany amiko, tsy ela taorian’izay, ary nasainy hanatrika fivoriambe aho. Natao teo amin’ilay kianja teo akaikinay ilay izy ka nandeha aho.
Efa nijery baolina tao amin’io kianja io aho volana vitsivitsy talohan’izay. Hafa mihitsy anefa ilay fivoriambe. Nahalala fomba sy niakanjo tsara ny Vavolombelon’i Jehovah ary hendry be ny zanany. Gaga mihitsy aho nahita an’ireo olona ireo tamin’ny fotoana fisakafoana. An-jatony izy ireo no nisakafo teo amin’ilay filalaovam-baolina. Rehefa niverina teny amin’ny toerany anefa izy ireo, dia tsy nahita fako latsaka mihitsy aho na ny kely aza. Fa ny tena nahavariana ahy, dia hoatran’ny afa-po sy nihavana tsara erỳ ry zareo. Izany mihitsy no niriko. Tsy nisy tadidiko ny lahateny natao tany, fa ny zavatra nataon-dry zareo kosa no tsy afaka tato an-tsaiko mihitsy.
Nahatsiaro an’ilay zanak’anabavin’ny dadanay izay aho tamin’io hariva io. Mpamaky Baiboly izy sady nianatra tany amin’ny fivavahana isan-karazany. Nilaza tamiko izy, taona vitsivitsy talohan’izay, fa ny voany no ahafantarana ny fivavahana marina araka ny tenin’i Jesosy. (Matio 7:15-20) Nieritreritra àry aho hoe tokony hofantariko, fara faharatsiny, izay mampiavaka ny Vavolombelon’i Jehovah. Lasa nanana fanantenana aho ary sambasamba aho vao nahatsapa an’izany teo amin’ny fiainako.
Niverina nitsidika ahy ireo Vavolombelona roa nanasa ahy hanatrika ilay fivoriambe, herinandro taorian’izay. Nanasa ahy hianatra Baiboly izy ireo dia nanaiky aho. Nanomboka nanatrika ny fivorian’izy ireo koa aho.
Niova tanteraka ny fomba fihevitro an’Andriamanitra rehefa nianatra Baiboly aho. Lasa fantatro fa tsy izy no mahatonga ny olona hanao ratsy sy hijaly. Izy aza malahelo be rehefa manao ratsy ny olona. (Genesisy 6:6; Salamo 78:40, 41) Lasa tsy te hanao zavatra mampalahelo an’i Jehovah intsony aho, fa te hampifaly azy. (Ohabolana 27:11) Tsy nisotro toaka be sy tsy nifoka sigara ary tsy ratsy fitondran-tena intsony aho. Natao batisa aho tamin’ny Martsa 1994, ka lasa Vavolombelon’i Jehovah.
Tena faly sy afa-po aho izao. Tsy misotro toaka intsony aho mba hamahana ny olana mahazo ahy. Apetrako amin’i Jehovah kosa izay manahirana ahy.—Salamo 55:22.
Nanambady an’i Karen aho ary folo taona izao izahay no nivady. Vavolombelon’i Jehovah izy ary tena tsara tarehy. Manan-janaka mahafinaritra be atao hoe Nella izy. Samy tia mandeha mitory izahay telo mianaka ka manampy ny hafa hahafantatra ny marina momba an’Andriamanitra. Izay vao misy dikany ny fiainako.
^ feh. 11 Navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Hizara Hizara Manova Olona ny Baiboly
Manova Olona ny Baiboly—Novambra 2012
w12 1/11 p. 10-14